Awerɛhodi—Nea Ɛsɛ Sɛ Wohwɛ Kwan
Nyan! | No. 3 2018
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language French Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mbunda Mexican Sign Language Mongolian Myanmar Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Urdu Uzbek Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
NEA ƐBƐBOA WƆN A WƆN BIRIBI AWU
Nea Ɛsɛ Sɛ Wohwɛ Kwan
Ɛwom, abenfo binom aka sɛ, obi biribi wu a ɔkwan pɔtee bi wɔ hɔ a ɔfa so di awerɛhow nkakrankakra. Nanso nea ɛte ne sɛ, ɛsono ɔkwan a obiara fa so di awerɛhow. Enti wei kyerɛ sɛ ebinom wɔ hɔ a sɛ wɔn biribi wu a ɛnka wɔn kɛse anaa wɔka wɔn awerɛhow hyɛ anaa? Ɛnyɛ saa na ɛkyerɛ. Ɛwom, sɛ wo biribi wu na wugye tom sɛ ɛyɛ yaw na wudi ho awerɛhow a, ɛboa ma wo ho tɔ wo ntɛm. Nanso yenni ɔkwan pɔtee bi a yɛfa so di awerɛhow a ɛno nko ara na ɛyɛ papa. Obi amammerɛ, ne suban, nea wafa mu wɔ asetenam, ne ɔkwan a ne dɔfo no faa so wui na ɛbɛkyerɛ sɛnea obedi awerɛhow.
DƐN PA ARA NA AWERƐHOW NO DE BƐBA?
Sɛ wo biribi awu a, ebia worentumi nkyerɛ tebea pɔtee a wobɛkɔ mu. Nanso ɔhaw ne atenka ahorow bi wɔ hɔ a, obiara a ne dɔfo awu tumi fa mu, enti sɛ wo dɔfo awu a, wo nso wubetumi ahwɛ kwan sɛ wobɛfa mu. Susuw nea edidi so yi ho:
Awerɛhow no betumi abunkam wo so. Ebia wubesu pa ara, w’ani begyina nea wawu no, na wo nneyɛe betumi asesa mpofirim. Afei sɛ wokae biribi fa nea wawu no ho anaa woso ne ho dae a, ebetumi ama awerɛhodi no mu ayɛ den. Mfiase no, ebia owu no bɛyɛ wo nwonwa na worennye nni. Ɔbaa bi a ɔde Tiina kae sɛnea ɔyɛɛ n’ade bere a ne kunu Timo wui mpofirim no. Ɔkaa sɛ: “Mfiase no asɛm no tɔɔ me so. Mantumi ansu mpo. Asɛm no bunkam me so araa ma na ɛtɔ mmere bi a, me home a ensi so. Ná minnye nni sɛ wawu ampa.”
Adwinnwen betumi ahyɛ wo so, wo bo betumi afuw, na wubetumi nso abu wo ho fɔ. Ɔbarima bi a ɔde Ivan kaa sɛ: “Yɛn babarima Eric a wadi mfe 24 wui akyi no, mmere kakra a edi hɔ no, me ne me yere Yolanda bo fuwii pa ara! Wei yɛɛ yɛn nwonwa, efisɛ na yennwen ho da sɛ yɛyɛ nnipa a yetumi fa abufuw saa. Yebuu yɛn ho fɔ nso, efisɛ yɛtee nka sɛ anka yebetumi ayɛ biribi de aboa yɛn ba no, nanso yɛanyɛ.” Ɔbarima bi a yɛfrɛ no Alejandro nso buu ne ho fɔ bere a ne yere yare kyɛe na owui no. Ɔkaa sɛ: “Mfiase no metee nka sɛ sɛ Onyankopɔn ama kwan ma merehu amane sei de a, ɛnde ɛbɛyɛ sɛ meyɛ nipabɔnefo. Wei ma mibuu me ho fɔ, enti ɛkɔyɛɛ sɛ merebɔ Onyankopɔn sobo sɛ ɔno na ɔmaa me yere no wui.” Kostas a yɛaka ne ho asɛm no kaa sɛ: “Mmere kakraa bi wɔ hɔ a, na me bo mpo fuw Sophia sɛ wawu. Nanso akyiri yi, mibuu me ho fɔ sɛ metee nka saa. Ade yi, worentumi mfa nhyɛ Sophia.”
Wudwen a, ensi so. Ɛtɔ da a, w’adwene betumi atu afra anaa wudwen a, ɛrensi so. Nhwɛso bi ni. Obi a ne biribi awu betumi asusuw sɛ otumi te nea wawu no nne, otumi so ne mu, anaa ohu no. Ebetumi nso ayɛ den ama no sɛ ɔde n’adwene besi biribi so anaa ɔbɛkae ade. Tiina kaa sɛ: “Ɛtɔ da na merebɔ nkɔmmɔ a, mitumi hu sɛ m’adwene nni nkɔmmɔ no so. Adwene no tumi kokyinkyin. Wobɛhwɛ na meredwennwen Timo wu no ho. M’adwene a na mintumi mfa nsi biribi so no, ɛno nko ara mpo teetee me.”
W’adwene bɛyɛ wo sɛ twe wo ho fi afoforo ho. Obi a ne biribi awu no, sɛ ɔne afoforo wɔ hɔ a, ne ho betumi ayeraw no anaa nneɛma betumi ayɛ no ahi. Kostas kaa sɛ: “Sɛ mewɔ awarefo mu a, na mete nka sɛ matɔ mu. Mekɔ asigyafo mu nso a, na mete nka sɛ matɔ mu.” Ivan yere Yolanda kaa sɛ: “Ebinom wɔ hɔ a, wode wɔn haw toto yɛn de ho a, wuhu sɛ wɔn de no sua koraa. Enti sɛ wɔkasakasa wɔn haw no ho a, ɛma ɛyɛ den sɛ me ne wɔn bɛbɔ. Afoforo nso, mmɔden a wɔn mma rebɔ no, na wɔka ho asɛm kyerɛ yɛn. Ɛyɛ a na m’ani agye ama wɔn, nanso bere koro no ara na ɛyɛ den sɛ metie wɔn. Me ne me kunu gye toom sɛ ɛmfa ho nea asi biara no, ɛsɛ sɛ yɛtoa yɛn abrabɔ so, nanso na yɛnyɛɛ krado sɛ yebetie saa nsɛm no, na na yenni ho abotare nso.”
Awerɛhow no betumi abɔ wo yare. Ɛtaa ba sɛ wɔn a wɔn biribi awu no, wɔn adidi tumi yɛ basaa, wɔn so tew, na wontumi nna yiye. Ɔbarima bi de Aaron. Ne papa wui, na afe baako a edi hɔ no, nea ɛtoo no no, ɔkaa ho asɛm sɛ: “Ná mintumi nna yiye koraa. Anadwo biara na m’ani so tetew me bere pɔtee bi, afei na midwinnwen me papa wu no ho.”
Alejandro yaree a wante ase. Ɔkaa sɛ: “Dɔkota yɛɛ me mu nhwehwɛmu mpɛn pii, na ɔka kyerɛɛ me sɛ menyare. Ná migye di sɛ awerɛhow a na midi no na ɛma me ho yɛ me basabasa.” Nkakrankakra ne ho tɔɔ no. Nanso nyansa wom sɛ Alejandro kohuu dɔkota. Awerɛhodi betumi ama nipadua no nkwammoaa a wɔko tia nyarewa no ayɛ mmerɛw, ebetumi ama wo yare bi ayɛ kɛse, anaa ebetumi ama woanya yare foforo.
Nneɛma bi a ehia no, ɛbɛyɛ den sɛ wubedi ho dwuma. Ivan kaa sɛ: “Eric wui akyi no, na ɛnyɛ abusuafo ne nnamfo pɛ na ɛsɛ sɛ yɛbɔ wɔn amanneɛ, mmom na ɛsɛ sɛ yɛbɔ afoforo pii nso amanneɛ. Ebi ne n’adwumawura ne ne fiewura. Ná nkrataa pii nso wɔ hɔ a mmara hwehwɛ sɛ yɛhyehyɛ. Afei, na ɛsɛ sɛ yeyiyi Eric nneɛma mu. Ná ɛsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si saa nneɛma yi nyinaa so, nanso saa bere no, na yɛn adwene ne yɛn nipadua no nyinaa abrɛ, na na awerɛhow nso ahyɛ yɛn mã.”
Afoforo nso de, ɛba sɛ akyiri yi ɛsɛ sɛ wɔso asɛyɛde a na nea wawu no di ho dwuma no mu a, saa bere no na wohyia wɔn haw. Ebi na ɛtoo Tiina. Nea ɔkae ni: “Timo na na da biara ɔhwɛ yɛn sikasɛm ne nnwuma afoforo a yɛwɔ so. Afei na ɛsɛ sɛ me nkutoo meyɛ ne nyinaa. Wei ma ɔbrɛ no bi bɛkaa ho. Enti mibisaa me ho sɛ, metumi adi ne nyinaa ho dwuma a menyɛ nneɛma basaa anaa?”
Ɔhaw ahorow a yɛaka ho asɛm no, ebi kɔ so wɔ adwenem, ebi kɔ so wɔ nipaduam, na ebi nso fa wo nkate ho. Wohwɛ sɛnea ɛte no a, ebia wobɛka sɛ sɛ wo biribi wu a, ɛbɛyɛ den sɛ wubegyina ɛyawdi no ano. Nokwasɛm ne sɛ, sɛ obi hwere ne dɔfo wɔ owu mu a, ɛyaw a ɔfa mu no, ano betumi ayɛ den. Nanso sɛ wɔn a wɔahwere wɔn dɔfo nnansa yi ara no nim ɔhaw a wɔbɛfa mu a, ebetumi aboa wɔn ma wɔagyina ano. Afei kae sɛ, ɔhaw ahorow a awerɛhodi de ba no, ɛnyɛ obiara na ɔfa ne nyinaa mu. Bio nso, sɛ obi a wahwere ne dɔfo wɔ owu mu behu sɛ, obiara a ɔredi awerɛhow no tumi fa ɛyaw mu a, ebetumi akyekye ne werɛ.
M’ANI BƐSAN AGYE BIO NI?
Nea ɛsɛ sɛ wohwɛ kwan: Worenkɔ so nni awerɛhow pii saa; nkakrankakra ɛbɛbrɛ ase. Ɛnyɛ nea yɛreka ne sɛ awerɛhow no to betwa koraa anaa worenkae wo dɔfo a wawu no bio. Nanso, nkakrankakra ɛyaw a ano yɛ den no bɛbrɛ ase. Sɛ mpofirim ara wokae biribi fa nea wawu no ho, anaa edu bere bi te sɛ ɛda a mode waree anaa ɛda a ɔde wui a, awerɛhow no betumi asan aba. Nanso nnipa dodow no ara wɔ hɔ a, akyiri yi wotumi di awerɛhow no so, na wotumi san toa wɔn abrabɔ so. Sɛ nea ne biribi awu no abusuafo ne ne nnamfo boa no, na ɔno nso yɛ nneɛma bi a ɛbɛma watumi agyina tebea no ano a, ɛno pa ara na ɛboa ma odi awerɛhow no so.
Wei nyinaa begye bere tenten ahe? Ebinom wɔ hɔ a, wɔn yaw denneennen no ano tumi brɛ ase wɔ abosome kakra akyi. Afoforo pii wɔ ha a, etumi gye afe anaa mfe mmienu ansa na wɔate nka sɛ wɔn ho retɔ wɔn. Ebinom nso de, etumi gye bere tenteenten. * Alejandro kaa sɛ: “Me fam de, midii yaw toaa so bɛyɛ mfe mmiɛnsa.”
Nya wo ho abotare. Nhaw wo ho sɛ wode da koro pɛ bedi awerɛhow no so. Yɛ no nkakrankakra sɛnea w’ahoɔden betumi. Hu sɛ awerɛhodi no rentena hɔ afebɔɔ. Ɛnde ebia wubebisa sɛ, biribi wɔ hɔ a wubetumi ayɛ seesei ara na ama awerɛhodi no ano abrɛ ase, na mpo antena hɔ ankyɛ dodo anaa?
Obiara a ɔredi awerɛhow no tumi fa ɛyaw mu
^ nky. 17 Nnipa kakraa bi wɔ hɔ a, wotumi di awerɛhow kɛse ma awerɛhow no hyɛ wɔn so kyɛ araa ma yetumi ka sɛ awerɛhow amene wɔn. Sɛ awerɛhow mene obi ma ɛboro so saa a, ebia ɛho behia sɛ okohu dɔkota a ɔhwɛ adwenemyare.
Nnipa pii wɔ hɔ a, bere a wɔn dɔfo wui no, wɔyɛɛ nneɛma pɔtee bi a aboa wɔn ma wɔagyina awerɛhodi no ano.
Share Share Nea Ɛsɛ Sɛ Wohwɛ Kwan
Obi Biribi Wu a, Ɛyɛ Yaw Pa Ara
Nea Eye Sen Biara a Ɛbɛboa Wɔn a Wɔn Biribi Awu
Nea Ɛwɔ Nhoma Yi Mu: Nea Ɛbɛboa Wɔn a Wɔn Biribi Awu
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! Nea Ɛbɛboa Wɔn a Wɔn Biribi Awu
Share Share NYAN! Nea Ɛbɛboa Wɔn a Wɔn Biribi Awu
NYAN! Nea Ɛbɛboa Wɔn a Wɔn Biribi Awu
So Saa Ara Na Obiara Te Nka?
Bere a Obi Maame Anaa ne Papa Awu